Ghode Jaatra/April Fool Day | घोडे जात्रा (काठमाडौँ उपत्यका मात्र विदा)/विश्व मूर्ख दिवस | २०७८ चैत १८ | Hamro Patro
घोडे जात्रा (काठमाडौँ उपत्यका मात्र विदा)/विश्व मूर्ख दिवस ( Ghode Jaatra/April Fool Day )
घोडेजात्रा l विश्व मूर्ख दिवस
वर्ष २०७८ सालको घोडे जात्रा हार्दिक स्वागत छ है । यस वर्ष त विश्व मूर्ख दिवस र घोडे जात्रा एकै दिन परेको छ । यसर्थमा आजको सँगालो सुरु गर्नु अगावै अप्रिल फुलको पनि शुभकामना ।
घोडा, घोडचढी, घोडसवार, यात्रा तथा युद्धजस्ता मानव सभ्यताको इतिहासमा घोडा अनि मानवबिचको सहकार्यलाई इतिहासका विभिन्न दस्ताबेजहरूमा निरन्तर व्याख्या गरिएकै छ अझ यो सम्बन्धबारे विभिन्न कथा-किस्साहरू जीवितै छन् । युरोप, अमेरिका, मध्य पूर्वी एसियादेखि लिएर संसारभर गाडीहरूको आविष्कार नहुँदा घोडा मात्र एउटा भरपर्दो र छिटो सवारीको माध्यम थियो । विश्वका प्राचीन ठूल्ठूला युद्धहरू चाहे त्यो महाभारत युद्ध होस्, नेपोलियन बोनापार्टको युद्ध होस् या मङ्गोल कन्क्वेष्टहरु सबैमा आफ्नो साम्राज्य र पहिचानको त्यो बखत घोडाको अधिकतम प्रयोग भएको थियो ।
अर्कोतर्फ वैदिक सनातन संस्कारमा घोडा अर्थात् 'अश्व'लाई अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण जीवको रूपमा लिइएको छ । वैदिक सनातन संस्कारमा सबैभन्दा पुण्य प्राप्त हुने महान् यज्ञ नै 'अश्व मेघ यज्ञ' हो, जसमा सयौँका सङ्ख्यामा घोडाहरूलाई स्वतन्त्र गरिन्छ र ती घोडाहरू जहाँ-जहाँ सम्म पुग्दछन् त्यहाँ शान्ति, सौहार्द्यता र आनन्द रहने विश्वास गरिन्छ ।
घोडे जात्रा एउटा अत्यन्तै पुरानो अनि सामाजिक जात्राका रुपमा प्राचीन काल देखिनै काठमाडौँ उपत्यकामा मनाइँदै आइएको परम्परा हो । आज चैत्र कृष्णपक्षको औँसी, यस दिन काठमाडौँको टुँडिखेलमा हज्जारौं सर्वसाधारणका बिच नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीले घोडे जात्रा विशेष परेड, कृत्य अनि अभ्यासहरू प्रदर्शन गर्ने गर्दछन् । घोडे जात्राको दिन बिहानै नेपाली सेनाले जुद्ध सडकस्थित रेवन्त पीठमा बोकाको बलि दिएर जात्रा सुरु भएको जनाउ दिने गर्दछन् । यसरी जनाउ दिएपछि क्रमशः दिउँसो टुँडिखेलमा घोडा र घोडसवारका विभिन्न कलाकौशलहरूको प्रदर्शनी सुरु हुन्छ । यसरी यस दिनमा गरिने प्रदर्शनको तयारी नेपाली सेना अनि नेपाल प्रहरीले महिनौँ अगाडिदेखि गरेका हुन्छन् । नेपाली सेनाका घोडसवारहरूले प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा घोडा दौडाउने हुँदा आज टुँडिखेलमा हेर्नेको भीड लाग्ने गर्दछ । त्यसका अलावा सेनाले शारीरिक व्यायाम, जिम्याष्टिक तथा विभिन्न खाले अश्वकला, मोटरसाइकल खेल र युद्धकलाको समेत प्रदर्शन गर्ने गर्दछ । काठमाण्डौमा हुनुहुन्छ भने आजको दिन यस जात्राको प्रत्यक्ष रमाइलो लिन टुँडिखेल जान सक्नुहुनेछ ।
यस जात्राको प्रथम दिन लुकुमहादेवको पूजा अर्चना गर्दै बलि चढाउने चलन छ, असनको अन्नपूर्ण मन्दिरको छेउमा आज खटहरूलाई एक आपसमा ठोक्काउँदै दुई दिदिवहिनीको मिलन गराउने चलन छ । यसरी चर्तुदशीको दिन साँझ भगवानका प्रतिमाहरूलाई सहर परिक्रमा गराउने चलन पनि छ । पहचारेको दोस्रो दिन घोडे जात्रा हो, घोडे जात्रा विवाहित छोरी र दिदिवहिनीहरुलाई माइतमा वोलाउने र भोज खुवाउने पनि चलन छ । आउनुहोस्, घोडे जात्रा विशेष यो आलेखमा एउटा सानो कथा या भनौँ किंवदन्ती प्रस्तुत गरौँ,
काठमाडौँ वासीहरूले पुस्तौँ पुस्तादेखि भन्दै आएका यो घटनाक्रम नै घोडे जात्रा मनाउन पछाडिको एउटा कारण हो । कथा यसरी सुरु हुन्छ..... परापूर्व कालमा टुँडिखेलको पूर्व दक्षिण दिशामा रहेको एउटा रूखमा बास गर्ने गुरुमापा नाम गरेको राक्षसले उपत्यकाको मानव बस्तीमा गएर विभिन्न प्रकारले दुःख दिने र बालबालिकाहरू खाइदिने गर्दथ्यो । यस्तो घटना नरोकिएपछि उपत्यकावासीले उक्त राक्षसलाई मार्न कालागि अनेक उपायहरू खोज्न थाले । त्यसै क्रममा उक्त राक्षसलाई घोडाको टापले कुल्चाएर मारिएको र त्यसैको विजय उत्सवका रूपमा घोडे जात्रा मनाउने परम्पराको सुरुवात भएको किंवदन्ती रहेको छ । अहिले पनि दौडने घोडाको टापले त्यस राक्षसको आत्मालाई दबाइराख्ने विश्वास गरिएको छ । यसो नगर्दा उक्त राक्षसको प्रेतात्मा बिउँझिएर सहरमा उधुम मच्चाउन सक्ने बुढापाकाहरूको भनाई छ । अर्कोतर्फ प्रत्येक वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदाबाट नयाँ वर्षको थालनी हुने मान्यता रहेको छ । त्यही आधारमा अघिल्लो दिन चैत्र कृष्ण औँसीमा अश्व यात्रा गरेर अर्थात् घोडा हिँडाएर नयाँ वर्षलाई स्वागत गर्ने प्रचलन रहेको छ ।
घोडे जात्रा उपत्यकामा हुने विशेष क्रियाकलाप
आजको विशेष दिन काठमाडौँ उपत्यकामा एउटा अद्भुत दैवी मिलन हुने गर्दछ । आउनुहोस्, हामी वेलिवस्तार लाउँदै छौ.....
आजको दिन भद्रकाली, लुमडी, कंकेश्वरी र भैरवहरुको प्रतिमालाई उठाएर असन चोकमा ल्याइन्छ । वर्षमा आजको दिन मात्र यस्तो दिन हा जब यी सबै भैरव प्रतिमाहरूले एक अर्कालाई भेट्दछन् । यसर्थमा हामीले आजको दिनलाई दैविक मिलनका रूपमा व्याख्या गरेका हौँ ।
घोडे जात्राका अवसरमा सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा प्रत्येक वर्ष नेपाली सेनाले कला कौशलताका साथ घोडा दौडाउने गर्दछ भने ललितपुरको पाटन बालकुमारीमा एक आँखा नदेख्ने एक्लो घोडा दौडाएर घोडे जात्रा मनाउने गरिन्छ । भक्तपुर को पचपन्न झ्याले दरबार परिसरमा सिङारिएको घोडा दौडाएर जात्रा मनाइन्छ । घोडे जात्रा हेर्न राष्ट्र प्रमुख सम्माननीय राष्ट्रपति सहित उच्च पदस्थ व्यक्तित्वहरू, कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरूलाई टुँडिखेललाई डाक्ने गरिन्छ । घोडे जात्रा अवसरमा सरकारले उपत्यकामा सार्वजनिक बिदा दिँदै आएको छ ।
टुँडिखेलमा सेनाले घोडे जात्रा बढाइँ गरेपछि उपत्यकाका किसानले आफ्नो खेतबारीमा सिमी, बोडी, भटमास, काँक्रो र फर्सी जस्ता तरकारी बालीको बिउ रोप्ने चलन पनि कायमै छ । हाल घोडे जात्रा काठमाडौँमा मात्रै सीमित नराखेर राष्ट्रिय महत्त्व बोकेको जात्राका रूपमा मनाउने गरिएको छ । काठमाडौँ बाहेक पाल्पा, धरान र बुटवलमा समेत घोडे जात्रा मनाउने गरिन्छ ।
पाटनको वालकुमारी क्षेत्रमा आजको दिन स्थानीय घोडाहरूलाई मदिरा खुवाएर चढ्ने चलन छ । यसरी मदिराको नशामा रहेका घोडाहरू हिँडेको अनि कुदेको हेरेर रमाइलो मान्ने चलन पनि रहेको छ । सुस्तरी यस्ता चलनहरूमा कमी भने आउँदै गएको छ । स्मरण रहोस्, एकीकरण पछि पनि भक्तपुर, पाटन अनि काठमाडौँका बिच आजको दिन अर्थात् घोडे जात्रा दिन कुन सहरमा कसको घोडे जात्रा राम्रो भन्ने विषयमा प्रतिस्पर्धा हुने गर्दथ्यो, यस जात्राको रगंमा उपत्यकाका सहरहरू आज पनि आ आफ्नै ढगंमा रङ्गिने गरेका छन् । आजको दिनको शुभकामना ।
पूर्व मेची वाट पश्चिम महाकाली चल्ने द्रुत रेलमार्ग वाट भर्खरै इलामबाट रेल चढेर म काठमाडौँ अफिस भ्याउन ९ बजे बिहानै आई पुगेको छु । नेपालले विश्वकप फुटबल जितेको समाचार त तपाईँले थाहा पाई हाल्नुभयो होला, अनि आज भर्खर विदेशमा रहेका नेपाली दूतावास अगाडी विदेशी हरुको प्रदर्शन रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ । नेपाली भिसा लिन अत्यन्त गाह्रो भएको उनीहरूको गुनासो छ ।
हाहा पत्याउनुभयो । नेपालको सर्वाधिक डाउनलोड भएको मोबाइल एप्स हाम्रो पात्रो आज अप्रिल फूल अर्थात् विश्व मूर्ख दिवसको शुभकामना दिन चाहन्छ, हाम्रा सबै जना प्रयोगकर्ताहरूलाई । अप्रिल फूल अर्थात् अप्रिल महिनाको प्रथम तारिख, आज बिहानै देखि विभिन्न बहानामा झुक्क्याउने, ठट्टा गर्ने अनि रमाइलो गर्ने चलन छ है ।
वर्ष सन् २०२१ को अप्रिल फुलको सन्दर्भ अलिक रोचक छ । आफ्नो घरबाहिर ननिस्क, नदेखिने भाइरसले समाउन सक्छ, मृत्युवरण गर्नुपर्ने हुनसक्छ भन्ने तर्कहरू सन् २०२० भन्दा अगाडिका वर्षहरूमा मजाक जस्तो लाग्ने थिए भनेँ सन् २०२ २ मा यिनै कुराहरू मजाक नभई सत्य साबित भएका छन् ।
सावधान रहनुहोला, बिहानै गोठमा भएको गाई फुकेर पारी गाँउमा अर्काको कान्लामा चर्दै छ भनेर सुनाएको भरमा हाम्रा गाउँका माइला बाजे आफ्नो गोठ नहेरी सखारै दोडिएछन् । बुढो ज्यान, थाकेको शरीर तर पनि दुहुनो गाई हराउला भन्ने तर्कना, त्यस वर्ष बाजेलाई अप्रिल फूलले विहान बिहानै छोएको थियो ।
रमाइलो आफ्नो ठाउँमा छ तर यसका नराम्रा पक्षहरू पनि आफ्नै ठाउँमा छ । अप्रिल फूललाई बेमौसम मजाकको गैर जिम्मेवार भाँडो मान्ने केही अबुझहरूका कारणले अप्रिल फूलको नमिठो याद पनि भएको हुनसक्छ । ज्यूँदै मान्छेलाई मर्यो भन्ने अफवाह फैलाईदिने, नभएको विपत्ति आईलाग्यो भनेर हल्ला मचाईदिने अनि अन्य कुराहरूमा हाहाकार मचाईदिने भने यस दिनका नराम्रा पाटाहरू हुन् । हाम्रो पात्रो प्रयोगकर्ता तपाई भने सचेत रहनुहोला ।
यो अप्रिल फूल किन मनाउन थालियो भन्ने विश्वासिला कारणहरू भेटिदैन् । बोस्टन यूनिभरसिटीका प्राध्यापक जोसेफ बस्किनका अनुसार रोमन राज्यमा कन्सटेनटाईनको शाषन रहेका वेला, आजकै दिनमा कैदि एवं अपराधीरुलाई एक दिनका लागी राज्य चलाउन दिईएको थियो ।
यसै दिनको सम्झनामा हरेक वर्ष अप्रिल फूल अर्थात् मूर्ख दिवस विश्वभरि मनाउन थालिएको मान्यता छ । लगभग यसै समय आसपासमा हिन्दु चन्द्र क्यालेण्डरमा होली, ज्वीस अर्थात् यहुदीहरुको क्यालेण्डरमा पुरीम र रोमनहरुको क्यालेण्डरमा अतिस पर्व पर्दछन् । मार्चको मध्यवाट र अप्रिलको प्रथम साता विचमा यी पर्वहरु पर्ने गर्दछन् । वसन्त क्रृतुको आगमनको स्वागतार्थ अप्रिल फूल एउटा महत्पूर्ण दिन हो, हामी मध्य धेरैको सम्झना अप्रिल फूलसँग जोडिएको हुनसक्छ, हैन र ?
इतिहास र चलनहरू नियाल्ने हो भने अप्रिल फूलले सन् १७०० पछाडि विश्वव्यापी रूप लियो जब अङ्ग्रेजी हास्य लेखक अनि कलाकारहरूले यसलाई अभिव्यक्त अनि आआफ्ना रचनामा उतार्न थाले । बेलायती, स्पेनिस, पोर्चुगिस अनि नेदरल्याण्डको उपनिवेशको बुद्धि सँगै मान्यता पाउँदै गयो ।
सन् १९५७ मा त बिबिसी ले नै स्विस किसानहरूले रुखबाटै चाउचाउ टिपेको भिडियो देखाइदिएर आजको दिन संसारलाई नै नयाँ वाली आयो भनी झुक्काएको थियो । विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूले पनि आजको दिनमा डर त्रास फैलाउने भन्दा पनि आशालाग्दा भ्रम अनि खबर फैलाएर आजको दिन मनाउँदछन् ।
विद्यालयमा छँदा साथीहरूको पछाडि कागजको पुच्छर जोडिदिने, ट्वाइलेटमा थुनिदिने, ब्याग र कापीहरू लुकाई दिने, पेन भित्रको रिफिल लुकाई दिने, खाली चकलेटको खोलमा मसिनो पत्थर राखेर दुरुस्त चकलेट जस्तो बनाएर बाटोमा छाडिदिने जस्दा धेरै क्रियाकलापहरु गरेका यादहरु पनि छन नि , कि कसो ?
मूर्ख र सज्जन एक आपसमा वाँझिएका शब्दहरू हुन् । आज मूर्ख दिवस हो , विश्व मूर्ख दिवस । आत्मसाथ गरौँ, कालिदासको ज्ञान अनि काव्यलाई तर स्मरण गरौँ उनी पहिले कति मूर्ख थिए भन्ने कुरा । वाल्मीकिलाई सम्झना गरौँ जो पहिले रत्नाकर डाँकु थिए अनि हामी आफैलाई याद गरौँ न ।
बच्चामा गरेका मूर्ख कामहरू लाई, मूर्खपना नराम्रो हैन तर यसबाट सिक्न अनि आगाडि बढ्न जरुरी छ । आज बोलेका झुट या मूर्ख बनाउने शब्दलाई चोट नपूर्याओस्, मूर्ख बनाउनुहोस् तर हसाउन नभुल्नुहोस् । अप्रिल फूल हाउसफूल होस् ।